ND YAG LASER TATOO REMOVAL Factory - Sina ND YAG LASER TATOO REMOVAL Mpanamboatra, mpamatsy
Long Pulse 1064nm Pain Free Laser Hair Removal LP02
Ny rafitra Q-switch manitsy ny vatosoa dia afaka manasitrana ny loko mifangaro amin'ny alàlan'ny rotsak'orana amin'ny loharano ivelan'ny loharano miaraka amin'ny fiovan'ny pigolojika pathological endogenous.
Laser manala ny piggecondrika Laser Picosecond ho an'ny P8 ara-barotra
Ny PicoSecond Laser dia mampiasa pulses ultra-fohy (iray lavitrisa segondra ny halavany) hamelezana ny melaninina miaraka amin'ny tsindry lehibe, ny melanin dia vaky ho potika kely toa vovoka. Satria kely dia kely ireo sombiny.
1200W Power Micro Micro Picosecond 755nm Laser Fanesorana Tattoo Birthmark P7
Q-switch nd yag laser 1064nm 532nm 1320nm fanesorana tatoazy laser K6S
Ny angovo laser vokarin'i Nd: ny laser YAG dia azo tototry ny melanin tanteraka, ary ny melanin dia mivelatra haingana ary mamaky ireo sombin-javatra bitika kely azo zahana amin'ny rafitra lymphatic.
Q mahery mifamadika nd yag milina fanesorana tatoazy laser K9
Ny tanjaky ny ND miova Q: Ny laser YAG dia azon'ny melanin manga sy mainty. Ny melanin dia hozaraina ho kely ka hahafahan'ny metabolisma sy ny fivoahan'ny vatana.
Ny kalitaon'ny vidiny farany azo antoka sy azo antoka nd yag laser fanesorana tatoazy K10
Nd yag Fitaovana tatoazy laser dia mampiasa ny maody Q swithch, izay mampiasa ny laser voaforona eo noho eo hamotika ny loko amin'ny rafitra ratsy. Izay ilay teoria emit avy hatrany amin'ny laser.
1064nm 532nm valizy azo entina miaraka amin'ireo pigment laser milina fanesorana tatoazy K12
Q Switch Nd: ny teknolojia fanesorana tatoazy Laser Yag dia vokatry ny fipoahan'ny laser. Araka ny fantatsika rehetra, ny laser dia afaka miditra amin'ny tampon'ny hoditra mankamin'ny toerana misy ny hoditra lalina izay misy.
Masinina fanesorana tatoazy laser azo alefa Picosecond 1064 Nm Q Switch Nd Yag P6
Ny masinina Q-Switched Nd YAG Laser Handpiece Ruby Laser Tattoo Removal Machine dia manome hery avo lenta saingy fantsom-pahazavana laser be dia be izay mamakivaky ny hoditra mba hamotipotehina ireo sombintsombin'ny pigment tatoazy.
Picosecond Laser Tattoo Removal Device Pico Laser Machine Fanavaozana ny hoditra Y12
Ampiasaina ny valin'ny photothermolysis voafantina tamin'ny laser ka ny laser dia mamokatra angovo avo lenta avy hatrany izay entin'ny pigment partoles, ka miteraka ny fanitarana azy
Pico seco laser fanesorana pigment nd yag tattoo fanesorana fitaovana hatsaran-tarehy laser Y15
Ny PicoSecond Laser dia mampiasa pulses ultra-fohy (iray lavitrisa segondra ny halavany) hamelezana ny melaninina miaraka amin'ny tsindry lehibe, ny melanin dia vaky ho potika kely toa vovoka.